Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Industry Hospitality Industry » Umhambi Omusha: Ukufuna Inhloso Njengoba Umhlaba Uvulwa Kabusha
I-16 min ifunde
I-American Hotel & Lodging Association (AHLA) iyona yodwa inhlangano kazwelonke emele zonke izingxenye zemboni yokulala yase-US. Indlunkulu yayo eWashington, DC, i-AHLA igxile ekumeleleni kwamasu, ukwesekwa kwezokuxhumana kanye nezinhlelo zokuthuthukisa abasebenzi ukuze kuqhutshekwe nemboni phambili. Ngemuva komqedazwe we-COVID-19, ukungenisa izihambi kwaba imboni yokuqala eyathinteka futhi izoba phakathi kweyokugcina ukululama.
Embikweni Wemboni Yezimo Zehhotela i-AHLA yethula umhambi wangomuso.
Lo bhubhane usushintshe kakhulu impilo yansuku zonke, kusukela endleleni abantu abaya ngayo emsebenzini nasesikoleni baya endleleni yokuthenga nokuzijabulisa. Yize ezinye izindlela zokuziphatha zalesi sikhathi zizophela, i-COVID-19 yenze uphawu olungenakucimeka empilweni—nohambo—njengoba silwazi.
Iqhutshwa Izisusa Ezihlukene
Ukuqhubekela phambili, imboni yamahhotela izozwa umthelela wezindlela abathengi abashintshe ngokuyisisekelo kulokho abakufunayo kanye nendlela abaziphatha ngayo nabasebenzisana ngayo nemikhiqizo.
Esikhundleni sokugxila kakhulu enanini nakwikhwalithi ekwenzeni izinqumo zokuthenga, laba bahambi abasha bakhuthazwa ukuba bathenge ngezinto ezihlanganisa impilo nokuphepha, ukunethezeka nokunethezeka, ukunakekelwa, ukwethenjwa, nesithunzi.
Eqinisweni, u-44% wabathengi baseMelika bathi lo bhubhane ubabangele ukuthi bacabange kabusha inhloso yabo futhi bahlole kabusha ukuthi yini ebalulekile empilweni, ngokocwaningo lwakamuva lwe-Accenture. Ucwaningo olufanayo luveza ukuthi u-49% ufuna izinkampani ziqonde ukuthi izidingo zabo ziguquke kanjani ngesikhathi sokuphazamiseka futhi zibhekane nalezi zidingo.
Ngaphezu kwalokho, u-38% ulindele ukuthi imikhiqizo izothatha umthwalo omningi wokubakhuthaza futhi ibenze bazizwe befanelekile kunokuba benze nje
Uma kukhulunywa ngokuqondene namahhotela, abavakashi abasha babeka iprimiyamu endaweni ephephile nehlanzekile, izinqubomgomo zokubhukha eziguquguqukayo nezingahlawulisi, isevisi yamakhasimende elula, imikhiqizo esimeme, nomthelela omuhle emphakathini.
Abaningi bathi bazimisele ukukhokha okwengeziwe ngalezi zinketho futhi bashintshele kubahlinzeki bezokuvakasha abahlukile (amahhotela, izinkampani zezindiza, izinhlangano zezokuvakasha, nama-OTA) uma kudingeka. Eqinisweni, abathengi abangama-45% bathi bacabanga ukusuka kumhlinzeki wezokuvakasha abasebenzisayo, ngokuphelele noma ingxenye, ezinyangeni eziyisithupha ezizayo kuya onyakeni.
Ukuphakama Kwesihambi Esisha Sokungcebeleka
Abahambi bezokungcebeleka abanalezi zisusa ezintsha bazoba amandla abalulekile okuqhuba isidingo sokuvakasha ngo-2022—ushintsho oluphawulekayo olwaqala ngonyaka odlule ngemva kweminyaka yohambo lwebhizinisi oluyisisekelo semboni yezokuvakasha yomhlaba wonke.
Njengoba izinqubomgomo zokuhamba zezinkampani zisashintshashintsha, uhambo lokungcebeleka luzoqhubeka nokululama ngokushesha ngo-2022, okuqhubekisela phambili ukufunwa kwehhotela. Ngokohlaziyo olwenziwa yiKalibri Labs, ngonyaka ka-2022 ukusetshenziswa kwemali kwamahhotela okungcebeleka kuzobe sekubuyele emazingeni ka-2019, kodwa ukuhamba kwezamabhizinisi kuzoba nzima ukufinyelela ku-80% wamazinga ka-2019. Lokhu kusho ukuthi isabelo sehhotela esichithwe ngohlobo lohambo sizoqhubeka nokuguqulwa ngaphambi kwalolu bhubhane; ngo-2019 uhambo lwezentengiselwano lwenze u-52.5% wemali engenayo yegumbi lemboni futhi ngo-2022 kulindeleke ukuthi kumele kuphela u-43.6%.24 Eqinisweni, izilinganiso ziwukuthi ihlobo lika-2022 lizoba ngelinye lamandla aqine kakhulu ohambo lokungcebeleka.
Amamodeli amaningi amabhizinisi amahhotela abegxile ngokuyinhloko ezidingweni zamakhasimende ebhizinisi njengokudlela endaweni, izinsiza zokuwasha, izindawo zokuvivinya umzimba, nezikhungo zebhizinisi. Izinsiza ezilindelwe abavakashi bezokungcebeleka, njengezindawo zokungcebeleka, amachibi, noma izinto zokuhamba eziya ezindaweni eziphezulu zabavakashi, ngokuvamile bekugxilwe kwesibili.
Ngakho, lawa mahhotela kuzodingeka enze izinguquko zesakhiwo endleleni aheha ngayo,
guqula, futhi ugcine amakhasimende ezokungcebeleka.
Uma kuqhathaniswa nabahambi bebhizinisi, abahambi bezokungcebeleka bafuna ukuqondiswa okwengeziwe ngenqubo yokubhukha kanye nolwazi olwengeziwe mayelana nendawo oya kuyo. Bathenga okuhluke kakhulu kunabahambi bebhizinisi. Kuncane mayelana nokucaciswa nokunethezeka njengoba kumayelana nokwengeza amasevisi ngokushesha ngemva kokubhukha kokuqala ngomoya wokuthola ulwazi nokuzidela. Ukulethela abahambi bezokungcebeleka kuzothatha ukubaluleka okwengeziwe ngoba kuzoba baningi ngo-2022.
Ubuso Obusha Bomhambi Webhizinisi
Nakuba isidingo sokuhamba ngebhizinisi sizokweqa leso sokuhamba ukuphumula, akuyona into yesikhathi esidlule, njengoba abanye bephikisana. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi e-United States, indawo ehamba phambili yebhizinisi edume kakhulu emhlabeni.28 Uhambo lwebhizinisi jikelele kulindeleke ukuthi lukhule ngo-2022 uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, futhi, ngokokuhlaziywa kwe-Kalibri Labs, nge-Q3 kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-80. I-% yezibalo zango-2019 Nakuba ukululama okuphelele kungalindelekile kuze kube ngu-29, ukuhamba kwebhizinisi emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi kukhuphuke ngo-2024% ngo-14, i-United States ne-China zibona ukukhuphuka okukhulu—kokubili kulindeleke ukuthi kukhule ngo-2022%
Ngokuhamba kwezinkampani ezinkulu ezilawulwayo zehla—futhi okungenzeka ukuthi ngeke ziphinde zibuye njengoba zazinjalo ngaphambi kwenhlekelele—amabhizinisi amancane naphakathi nendawo (ama-SME) azohola indlela ekululameni kwezohambo lwamabhizinisi ngo-2022. Lokhu kuqhubekisela phambili inkambiso eyaqala ngo-2020 lapho umthamo wokuhamba kwama-SME wehlile kodwa ungekho ezingeni elifanayo nalo lonke uhambo lwamabhizinisi ngesikhathi sokuphakama kwalolu bhubhane.
Abaholi kuwo wonke amahhotela, izindiza, abahlinzeki bezimoto eziqashisayo, nezinkampani zokuphatha ukuhamba baveze ukuthi ama-akhawunti abo ama-SME abuye ngokushesha aphuma ngo-2020 futhi ayaqhubeka nokwenza kahle kakhulu ezinkampanini namuhla. Lokhu bakusho ukuthi izinkampani ezincane ziqale ukusheshe zibuyele ehhovisi, okuyingxenye yalokhu, zafaka abantu bazo emgwaqeni ngokushesha. Bakholelwa futhi ukuthi ukuhamba kwama-SME kukhuthazwa yimikhawulo embalwa yokuhamba kanye nezinqubomgomo zokuhamba ezivumelana nezimo. Laba baholi babona isidingo esikhulayo esivela kuma-ejensi amancane wokubonisana, amafemu ezomthetho nama-accounting, nabathengisi, futhi balindele okufanayo ngo-2022.
Umkhakha wama-SME umele ithuba elihle lokuthi amahhotela agcwalise indawo yokuhlala phakathi nesonto futhi alinganisele amaphethini alindelwe kakhulu ezokungcebeleka. Lena imakethe engakasetshenziswa kakhulu—eyayivamise ukukhishwa ingxenye enkulu okuxoxiswene ngayo yebhizinisi. Ukuze amahhotela alisebenzise ngokugcwele leli thuba, kuyoba kubalulekile ukusungula othintana nabo nabangase babe khona futhi baqonde izidingo zale ngxenye. Ijubane nokunethezeka cishe kuzoqhubeka nokubaluleka, kodwa abahambi bebhizinisi lama-SME bazogxila kakhulu ezindabeni zezempilo nezokuphepha manje kunangaphambili.
Izigaba Zabahambi Abasafufusa okufanele Zibukwe
Ukuvela komsebenzi okude ngesikhathi sobhubhane - kanye nokuqhubeka kwawo kokujwayelekile njengoba izinkampani zenze izindawo zokusebenza eziguquguqukayo ngenxa yesidingo - kubhebhethekise ukuvela kwezigaba ezintsha zabahambi ezihlanganisa izinto zebhizinisi nezokungcebeleka.
Ukuhamba nge-Bleisure - lapho abahambi bezongcebeleka be-piggyback kanye nohambo lwebhizinisi behlukene - kubizwe ngokuthi umugqa wesiliva owubhubhane. Yize lezi zinhlelo zingezintsha, bezivame kakhulu kubahambi abasebasha ngaphambi kwalolu bhubhane.
Namuhla, ukuhamba nge-bleisure kuvame kakhulu phakathi kwabahambi bebhizinisi kuwo wonke amaqembu abantu. Eqinisweni, ucwaningo olulodwa lwango-2021 lwabahambi bebhizinisi bomhlaba bathola ukuthi u-89% wayefuna ukungeza iholide langasese ohambweni lwabo lwebhizinisi ezinyangeni eziyishumi nambili ezizayo.
Abanye ochwepheshe bezokuvakasha bacabanga ukuthi uhambo lokundiza uye emhlanganweni kanye nohambo lokubuyela emuva usuka emhlanganweni luzoba yinto yesikhathi esidlule nokuthi uhambo lwezinsuku eziningi lwe-bleisure ekugcineni luyoba “uhambo lwebhizinisi olusha.”
Lolu shintsho lungenzeka ngoba izinkampani zivame ukubekezelela lolu hlobo lohambo lwebhizinisi.
Imihambima yedijithali - abantu abakwazi ukusebenza noma yikuphi futhi bathathe uhambo - nabo bayakhula. Bamele ukucabanga kabusha okujulile kokuguquguquka okungokwesiko phakathi komsebenzi nokuhamba, lapho abantu besebenza khona
ukuhamba noma ukuhambela umsebenzi. Imihambima yedijithali ihamba ngenkathi isebenza, ime ezindaweni ezahlukene futhi ihlale isikhathi eside njengoba ifuna, bese iqhubekela phambili. Ukutholakala kokuxhumana empeleni ukuphela kwento ekhawulela ukukhetha kwabo kohambo. U-Skift ubike ukuthi abantu baseMelika abayizigidi ezingu-3.7 bangase bakwazi ukuhlala nokusebenza njengama-digital nomad. Nakuba ingxenye ye-niche namuhla, ukuhlaziywa kwemakethe kuphakamisa ukuthi izokhula ngokushesha futhi ibe namandla.
Singase futhi silindele ukufiphala kwala masegimenti njengoba ukuzizwisa kwabahambi benjabulo kubaphusha ezindleleni zokusebenza ezihlala unomphela zesitayela sedijithali.
IZINDAWO ZOKUBUKISWA KWEZOBUCHWEPHESHE
Ubuchwepheshe budlala indima ebaluleke kakhulu ekwenzeni imboni yamahhotela ikwazi ukusabela ezidingweni ezishintshayo zabavakashi kanye nalokho abakuthandayo. Sihlanganyele ne-OracleHospitality ukuze siqonde amathrendi amakhulu kakhulu obuchwepheshe alindeleke ngo-2022 nangale kwalokho
Ukuyigcina ingumuntu ngobuchwepheshe. Ukwenza kube ngokwakho kobuchwepheshe kuzothatha
elinye igxathu eliya phambili, namahhotela asebenzisa ubuchwepheshe bedijithali ukudambisa umsebenzi futhi
ngokuqhubekayo, yanelisa isivakashi ngasinye ngolwazi olusha lwesivakashi. Lokhu kuhlanganisa
konke okuvela kuzinketho zomuntu ngamunye zokudla nesiphuzo kanye nokungena okuguquguqukayo kanye
izikhathi zokuphuma ukuze umkhawulokudonsa wegumbi owandisiwe wawo wonke amasegimenti wabahambi. Nakuba amahhotela aphambili aziwa ngokukhethekile ngesevisi echazwa ngokuthintwa komuntu siqu, amahhotela azo zonke izinhlobo azosebenzisa amathuluzi ezobuchwepheshe amaningi azisiza “ukuzuza ulwazi,” athuthukise kancane kancane okuhlangenwe nakho kwezivakashi nokuhlangana noma ukweqa izindinganiso zesevisi ezimisiwe.
Ukwenza kabusha uhambo lwesivakashi kanye nabasebenzi. Iselula, izinsiza zokuzisiza ziyavuma
izivakashi ukuze zizulazule ohambweni oluvamile lwesivakashi—kusuka ekubhukheni ukuya
ukuphuma - ngaphandle kokuxhumana ngqo nabasebenzi. Ngenxa yalokho, abasebenzi basehhotela
bachitha isikhathi esincane emisebenzini, njengokucubungula ukungena, futhi bangaqhubeka
izinhlelo ezingenza umthelela omkhulu kusevisi yamakhasimende.
Ukushintsha izixazululo zobuchwepheshe zasendlini. Sekuyiminyaka, amaketanga amahhotela amakhulu abe namaqembu angaphakathi endlini athuthukisa ukuphathwa kwezakhiwo zawo kanye nokubhukha okumaphakathi
izinhlelo. Kepha ukuntuleka kokuhlanganiswa, izinkinga zokuhambisana, nezindaba zokuthobela—
kanye nezindleko zokugcina lezi zixazululo zifanelekile futhi zishesha—kudala izinselele
emaqenjini angaphakathi. Ngamaqembu amaningi amahhotela ahlela kabusha phakathi nobhubhane, futhi
ukugxila embonini yonke ekuvuseleleni nasekukhuleni, amahhotela engeziwe azosuka kumathuluzi angaphakathi aye emalini “engaphandle kweshalofu” evela kubathengisi bezimboni. Lolu shintsho ngeke lunciphise kuphela izindleko zokusebenza, kodwa futhi luthuthukise ukunikezwa kwesevisi kubasebenzi nezivakashi.
Ukwandisa ukusetshenziswa kwe-PMS eguquguqukayo. I-Property Management System (PMS) iyisikhungo
imisebenzi yehhotela. Ngokukhula okunamandla ezinhlelweni zokusebenza "ezilenga" ngaphandle
Ukuhlanganiswa kwe-PMS, okusheshayo, okulula, nokuphansi noma okungenazindleko kuyisidingo sokuqhubeka
emisha kanye ne-ecosystem yobuchwepheshe ephumelelayo. Akekho umhlinzeki we-PMS ongahlangana ne
izimfuno zawo wonke amahhotela. Ngenxa yalokho, opharetha bamahhotela bazoya ngokuya bephendukela kusixazululo se-PMS esinenethiwekhi ekhulayo yozakwethu abahlanganisiwe abanikeza amakhono anwetshiwe.
Umfanekiso 5 - Amahhotela Aphendukela Ezobuchwepheshe Ukuze Alungele Ikusasa
Accenture Business Ukuhamba ngezebhizinisi China Covid-19 Ubuchwepheshe I-united states
Izindiza ze-New London eziya e-Hanoi ku-Bamboo Airways
I-Russian Invasion Spurs Ransomware yaseRussia...
I-UNWTO Ukumiswa KweRussia Akukho emthethweni?
I-Lion on Rampage idubule yadliwa eWestern Uganda
Ukugetshengwa kwe-Skyway: I-Russia yeba amakhulukhulu emali eqashisiwe ...